Vertigo အမူးရောဂါ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျနော့်အသက် ၅၂ နှစ်ပါ။ အသက် ၃၇ နှစ်မှာ လည်ပင်းအရိုးကြီးပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၅၀ မှာ မူးတဲ့ဝေဒနာခံစားရပါတယ်။ အပေါ်မော့်ကြည့်တဲ့အခါ ညာစောင်းအိပ်တဲ့အခါ မူးပါတယ်။ အဲဒီမူးတာနဲ့ဘဲ အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာဆေးပြန်ကုတာသက်သာပါတယ်ဆရာ။ အခုအသက် ၅၂ မှာ နားအတွင်းကအသံ မြည်နေတာပါ။ ထိုင်ရာကထတဲ့အခါ ညာ-ဘယ်ဘက်စောင်းအိပ်တဲ့အခါ၊ ဘုရားဦးချနေတဲ့အခါ နားထဲကအသံတွေမြည်နေ ပါတယ်ဆရာ။ ကိုယ်ကိုပြန်မတ်လိုက်ယင်တော့အသံမမြည်တော့ပါ။ လေးစားစွာဖြင့်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျမအသက်က ၄၁ နှစ်ပါရှင့်။ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ရှင့်။ အခြားထွေထွေထူးထူးရောဂါမရှိပါဘူးရှင်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ တုန်းကတခါ၊ အခု ၂၀၁၇ ဖေဖေါ်ဝါရီထဲမှာတခါ မျက်စိကလေးစောင်းကြည့်လို့မရအောင်ကို မူးတာပါရှင့်။ ခေါင်းကိုလည်း နည်းနည်းလေးမှလှုပ်မရဘဲ မျက်စိမှိတ်ထားမှ နေသာပါတယ်။ စားသမျှအကုန်အန်ထွက်ပြီး တော်တော်လေးနေရခက်ပါတယ်။ အိမ်နားကဆေးခန်းက အာရုံကြောအအေးပတ်တာလို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ ကျမထပ်ဖြစ်မှာ အရမ်းကြောက်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင့်။ အဲဒီရောဂါက ဘာအကြောင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ထပ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆင်ခြင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါရှင်။
Vertigo ဗာတိုင်ဂို အမူးရောဂါဖြစ်ရင် လည်နေသလိုမူးတယ်။ မြင်မြင်သမျှက လည်နေသလိုထင်တယ်။ ဟန်ချက်မထိန်းနိုင်ပဲ ထိုင်ကျ၊ လဲကျတော့မယ်။ နားအတွင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ အတွင်းနားကနေ ဦးနှောက်ကို ကမ္ဘာ့ဆွဲအား အခြေအနေကို သတင်းပို့ပေးနေပြီး ကိုယ်ခန္ခာကို ထိန်းနိုင်အောင်ကူညီနေတယ်။
BPPV ဆိုတဲ့အမူးရောဂါမှာတော့ အတွင်းနားမှာ ပုံဆောင်ခဲလေးတွေ မလိုအပ်ပဲစုဝေးနေရာနေ မူးစေတယ်။ အသက်ကြီးတာနဲ့လည်း ဆိုင်တယ်။ သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။
Meniere's disease ရောဂါမှာတော့ အတွင်းနားမှာ အရည်စုဝေးနေလို့မူးစေတယ်။ နားအကြားကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်။
Vestibular neuritis ဒါမှမဟုတ် labyrinthitis ရောဂါမှာတော့ အတွင်းနားကို ပိုးဝင်ရာကနေဖြစ်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ကနေဖြစ်တာများတယ်။
အမူးရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တခြားအကြောင်းခံတွေလည်းရှိသေးပါတယ်။ ဦးခေါင်းကိုထိခိုက်မိတာ၊ ဦးနှောက်အကျိတ်၊ တချို့ဆေးဝါးတွေနဲ့ မိုင်ဂရင်းရောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။
ဆေးမလိုပဲ ပျောက်နိုင်တယ်။ Vestibular rehabilitation နည်းမှာ ဖီဇစ်ကယ်လ်သာရပီလုပ်ပေးတယ်။ Canalith repositioning maneuvers နည်းမှာဖစ်သူတွေကို BPPV ကိုယ်ခနာလှုတ်ရှားမှုတွေအတွက် နည်းနာတွေ သင်ပေးမယ်။ Infection ပိုးဝင်နေသူကို ပိုးသေဆေးပေးမယ်။ Meniere's disease ဖြစ်သူကို diuretics ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးပေးမယ်။ Surgery ခွဲစိတ်ကုသနည်း တချို့မှာလိုမယ်။
Migraine Emergency treatment မိုင်ဂရင်း အရေးပေါ်ဆေးများ (အန်တာကို သက်သာစေသည်။ အိပ်ချင်မည်။)
5. Dihydroergotamine (DHE) 0.75 to 1 mg Slow IV, Not for Coronary disease, Prgenancy and Hypertension (နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် သွေးတိုးရှိသူများမှအပ) သွေးကြော-ထိုးဆေး၊
Acute Periphreral Vertigo Emergency treatment ရုတ်ရက် အပြင်းအထန်ခေါင်းမူးရောဂါအတွက် အရေးပေါ် ဆေးများ
1. Meclizine 25 mg တနေ့ ၁-၂-၃ ကြိမ် သောက်ဆေး၊ (ကျွန်တော် တခါတခါသောက်ရပါတယ်။)
2. Scopolamine 0.5 mg Intra-dermal patch 3-4 timesaday (Behind ear) နားနောက်မှာ ကပ်ခွါဆေး၊
3. Dimenhydrinate 50-100 mg IM or PO4hourly အသားထိုးဆေး နဲ့ သောက်ဆေး၊
4. Diphenhydramine 25-50 mg IM or PO6hourly အသားထိုးဆေး နဲ့ သောက်ဆေး၊
5. Cyclizine 50 mg တနေ့ ၄-၆ ကြိမ် သောက်ဆေး၊